Ama-lentile namazambane isidlo esilula futhi esiphelele kakhulu | Ukupheka Kwekhishi
Sizolungisa ezinye udali ngamazambane isitshulu esinothile, esilula futhi esilula ukulungiselela. Isitsha esiphelele esiqinisekile ukujabulisa wonke umuntu. Isitsha okuthi uma ufuna ukusilungisa ngokushesha ungathenga udali ophekiwe, thosa imifino, ubeke udali, amazambane, umboze ngamanzi bese uwashiya kuze kube yilapho amazambane esevuthiwe futhi elungile, kodwa uma unesikhathi kungcono ukuziphekela wena.
Lokhu kudla kukadali okunamazambane nakho kunemifino futhi akunamafutha, isidlo semifino esilula futhi esinempilo somndeni wonke. Ungazilungiselela kusuka osukwini olulodwa kuye kolandelayo okuzoba ngcono nakakhulu.
Isikhathi Ukupheka: 50 m
Isikhathi esiphelele: 1 h 5 amaminithi
300 gr. udali
Pepper upelepele oluhlaza
Isipuni esingu-1 se-paprika esimnandi
I-1 bay leaf
Sisika imifino, ingaqunywa yonke noma ingafakwa izingcezu ezinkulu. Sihlanza imifino, siyigeze ngaphansi kompompi.
Sifaka konke okuluhlaza embizeni, sizofaka ne-paprika, sigcine amazambane.
Simboza yonke into ngamanzi abandayo bese siyifaka emlilweni omkhulu ize iqale ukubila.
Lapho iqala ukubilisa, yehlisa ukushisa, uyiyeke ipheke futhi yenze i-chup-chup. Sizoyivumela ipheke.
Ngenkathi udali upheka silungisa amazambane, siyawaxebula bese siwasika sibe yizicucu bese siwashiya emanzini kuze kube yisikhathi sokuwafaka entanyeni.
Maphakathi nokupheka udali cishe imizuzu engama-20 sizofaka amazambane nosawoti, sizodedela konke kupheke kuze kube sekulungile.
Lapho sibona ukuthi bacishe babe lapho, siyawanambitha ngosawoti bese sikubeka njengokuthanda kwethu.
Futhi bazobe sebekulungele ukudla !!!
Isitsha esilula futhi esihle
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Abangane » Okufakiwe Okushisayo » Ama-lentile namazambane
Ama-Muffin we-Pumpkin Chocolate